Tag: warbaahinta bulshada | Martech Zone
Tag: warbaahinta bulshada
Marka aad dhex rogto baraha bulshada ama mareegaha, waxa aad inta badan iman doontaa sawiro macluumaad oo si qurux badan loo nashqadeeyey kuwaas oo siinaya dulmar mawduuc ah ama u jajabinaya tiro badan oo xog ah oo garaaf ah oo qurux badan, hal garaaf ah, kaas oo ku dhex jira maqaalka. Xaqiiqdu waxay tahay… taageerayaasha, daawadayaasha, iyo akhristayaasha ayaa jecel iyaga. Qeexida infographic waa taas… Waa maxay Infographic? Infographics waa sawiro muuqaal ah oo xogta, xogta, ama aqoonta loogu talagalay in la soo bandhigo
Dabaysha Dabaylaha Abuur: Abuur, Jadwal, oo Ku Daabac Biinanka Quruxda Badan Pinterest
Khamiis, Maarso 10, 2022 Khamiis, Maarso 10, 2022 Douglas Karr
Tailwind Create waxay si dhakhso leh u samaysaa biinanka tayada-qaabeeya ee Pinterest waxayna kuu oggolaanaysaa inaad hagaajiso oo aad horumariso dhammaan suuqgeynta Pinterest kaaga si ka wanaagsan sidii hore. Hal gujin, waxaad awood u leedahay inaad u beddesho sawiradaada daraasiin fikrado naqshadaynta Pin la gaaryeelay. Aaladda loo wada dhan yahay ayaa awood kuu siinaysa inaad abuurto, jadwal siiso oo aad daabacdo Pinterest. Sida Loo Nakhshadeeyo Dabi-dabeed Abuur Halkan waa muuqaal kooxdu isugu geysay sida loo isticmaalo Tailwind Create. Tailwind Create waxay awood u siisaa suuqgeynayaasha Pinterest